Ubume beKhemikhali yeFurfural
I-furfural chemical compound Furfural (C4H3O-CHO), ekwabizwa ngokuba yi-2-furaldehyde, ilungu elaziwayo losapho lwe-furan kunye nomthombo wolunye uboya obubalulekileyo. Lulwelo olungenambala (indawo yokubilisa eyi-161.7 ° C; ubunzima obuyi-1.1598) ...
ngomphathi ku 20-08-13
Yintoni uFurfural? I-KC BRUNING Furfural yikhemikhali eyenziwe ngezinto eziphilayo eziveliselwa iinjongo zeshishini. Yenziwe ngokukodwa yimveliso yezolimo ezinje ngee-husk ze-oat, i-bran, i-corncobs kunye ne-sawdust. Eminye yep ...
Ifayibha yezityalo zeBagasse
Iakhawunti ye-Melanoma engabhalwanga iipesenti ezi-4 kuphela zomhlaza wolusu kodwa iphakathi kwezona neoplasms zibulala kakhulu. I-Dacarbazine sisiyobisi esikhethiweyo kunyango lwe-melanoma eBrazil ngenkqubo yezempilo yoluntu ikakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, yi-alkyl ...
I-Shenxian Shuiyuan entsha yeThekhnoloji yezaMandla Co, Ltd
Umnxeba: 0086 + 18963566079
Indawo yewebhu: www.watersourcechem.com